ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - တရုတ်အထူးသတ္တု Group မှလီမိတက်
တရုတ်အထူးသတ္တု Group မှလီမိတက် (CSM) , တစ်ဦးပေးသွင်း သတ္တုဗေဒ Machinery, ဘိလပ်မြေ & သတ္တုတွင်းစက်ယန္တရား, ကြေးနီသတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်း်ဆောင်မှုများ၏အရည်အသွေးမြင့်ကမ်းလှမ်းရန်ခုထဲက ladle, ingot မှို, ဒေါင်လိုက်စက်, High-တိကျစွာစက်ထုတ်ကုန် ချ. , slag အိုးများ, သင်္ခါရ welded လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှတန်ဖိုးထားဖောက်သည်။ ဤအတောအတွင်းငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့် turnkey စီမံကိန်းကိုကိုဆက်ကပ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုသည်လေးအဓိကအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အခြေစိုက်စခန်းများပိုင်ဆိုင်သည်။ Xinxiang နှင့် Yiyang အတွက် Casting အခြေစိုက်စခန်းများ; Wuxi အတွက်ဂဟေဆော်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများအခြေစိုက်စခန်း; Xi'an အတွက်အထူးအလွိုင်းအခြေစိုက်စခန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက်စခန်းစီးပွားဖြစ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်က ISO 9001 လက်မှတ်ကိုရှိသည်။
- ကျနော်တို့ 30 ကိုတန်ချိန် alkaline များလျှပ်စစ်ကို arc မီးဖိုထဲက2စုံရှိသည် ဖြစ်. , 35ton, 50tons နှင့် 75tons ၏စွမ်းရည်နှင့်အတူ ladle လွှဲပြောင်း၏ 8sets; မီးဖုတ်ထားသောပဋိညာဉ်စာတမ်း2စုံကို;4ကြီးမားသောအပူကုသမှုမီးဖိုထဲကအစုံနှင့်အောက်စီဂျင်မျိုးဆက်ဘူတာရုံအပါအဝင်ထောက်ပံ့အဆောက်အဦ, လေဖိအားစက်ရုံ, သဘာဝဓါတ်ငွေ့ဘူတာရုံ, CO ဘူတာရုံနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများစက်တွေဖယ်ရှား 22 အစုံ။ အဆိုပါရုတ်သိမ်းစွမ်းရည် 200tons ရောက်ရှိ။ ကျနော်တို့အကြီးစားတန်ဆာပစ္စည်းကိရိယာများ၏5စုံကိုပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဤအတောအတွင်းငါတို့သည်လည်း, OBLF နှင့်ကာဗွန်ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည်မြန်နှုန်းမြင့် Analyzer ကဲ့သို့အခြားစစ်ဆေးခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် GS1000 လေဟာနယ်တိုက်ရိုက်စာဖတ်ခြင်း Spectrometer, မြန်နှုန်းမြင့် Analyzer ၏ microcomputer သုံးဒြပ်စင်, ထိုကဲ့သို့သောဓာတုပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ် ultrasonic အားနည်းချက် detector, ဘက်စုံသုံးသံလိုက်အမှုန့်အပြစ်အနာအဆာ detector များ ငါတို့သည်လည်းသြဇာတစ်လောကလုံးအစှမျးသတ်တိ tester, sac thumping စက်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မှလွဲ. ။ သစ်ကိုရညျအသှေးအဆငျ့ Cast သေချာဖို့ CAE ဆော့ဖျဝဲခြင်းအားဖြင့်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Simulating ။ လူအားလုံးတို့သည် Cast ကို arc ဒေါ, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ဒေါ, မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကရနိုင်ရန်အတွက်ရိုက်ချက်-ပျက်သောစပါးများကဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ကြသည်။
- ကျနော်တို့ဒီလို OD2.5M, OD4M, OD5M, OD6.3M, OD8M, OD10M ၏ဒေါင်လိုက်တွင်ခုံအဖြစ်အဆင့်မြင့်စက်အားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသော CNC စက်စင်တာ, ရှိသည် ဖြစ်. , OD3.15M, OD3.2M, OD5M, OD6.8M, OD8M, OD10M ၏ဂီယာ hobbing စက်; W250G CNC ပျင်းစရာများနှင့်ကြိတ်စက်; XK2755 * 200/25 * 20 CNC girder-set မိုဘိုင်းပျင်းစရာများနှင့်ကြိတ်ခုံ; T6920 မိုးသည်းထန်စွာပျင်းစရာများနှင့်ကြိတ်စက်; Off-line ကိုဖွင့်လှစ်ကို arc welding စက်; 150T အော်တိုနစ်မြုပ်ကို arc ဂဟေ; OD6.2 * 20 မီတာဆလင်ဒါတွင်ခုံ, CNC ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်းစက်; စက်ဖြတ်တောက် CNC မီးလောင်; 16M အစွန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစက်; 150T gantry ရိန်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဆိုပါ Cast အလေးချိန် 120MT အထိဖြစ်ပါတယ် singe သတ္တုဗေဒသုံးစက်ကိရိယာများ, ဘိလပ်မြေစက်ယန္တရား, သတ္တုတွင်းစက်ယန္တရား, Hydraulic နှင့်လျှပ်စစ်စက်, ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း, လေပါဝါမျိုးဆက်, etc တို့ပါဝင်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်, ဘိလပ်မြေနှင့်သတ္တုတွင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက် ladles, slag အိုး, ingot မှို, ကြိတ် House, Chuck, girth ဂီယာ & ဘီး ချ. စားပွဲကြိတ်နှင့်စက်များများအတွက်ကြိတ်စက်ကြိတ်, အမှုနှင့်စက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့ပန့်များ, ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထုပ်ဘို့ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် ။